Ny fomba sary Vaporwave ho hetsika maoderina sy ankehitriny | Famoronana an-tserasera
Ny fomba sary Vaporwave, fomba io maoderina sy ankehitriny. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2010. Ny niandohany dia avy amin'ny karazana mozika antsoina amin'ny anarana mitovy, Vaporwave. Ity fomba mozika ity dia mipoitra avy amin'ny karazana dihy Indie toa ny Seapunk, trano mpamosavy ary chillwave. Azo raisina a lahy samy lahy novokarin'ny sehatra microblogging, Tumblr na Reddit izay mahaliana ihany koa ny sary Geocities sy ireo karazana mozika maoderina sy fanandramana.
1 Vaporwave amin'ny maha hetsika maoderina sy ankehitriny azy
Vaporwave amin'ny maha hetsika maoderina sy ankehitriny azy
Ny fomban'ny Vaporwave misy fahasamihafana sy tsy mazava be amin'ny fihetsiny sy ny hafany. Raha ny filazan'ilay mpanakanto dia azo raisina ho fitsikerana sy tononkalo mifantoka amin'ny kapitalisma izy io, ary koa mampiditra antsika amin'ny tontolo tsy misy fotony. Manao miresaka momba ny kolontsaina pop nanomboka ny am-polony taona 80s sy 90s ary ny fahaterahan'ny vanim-potoanan'ny Internet. Izy io dia azo raisina ho referansa fitsikerana ny kolontsaina yuppie, tena fahita any Etazonia tamin'ny taona 80. Ny teny hoe Yuppie dia manondro ny fihetsika mahazatra araka ny stereotype an'ny mpitantana tanora eo anelanelan'ny 20 sy 39 taona any Etazonia Ny stereotype an'ireo olona ireo dia niavaka tamin'ny sanda natoron'izy ireo mihoatra ny fitaovana sy ny fahalianana nasehon'izy ireo tamin'ny haitao (finday avo lenta, takelaka, sns.).
Ny sary an-tsary sy mozika Vaporwave koa aingam-panahy avy amin'ny hetsika kolontsaina sy mozika New Age, izay mampiseho fahagagana sy fahanginana amin'ny zava-kanto. Ny hetsika ara-kolontsaina, izay azo adika ho New Age, dia nampiasaina nandritra ny tapany faharoa tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy ny fiandohan'ny faha-XNUMX. Ny fiaviany dia avy amin'ny finoana ny mpanandro.
New Age, ankoatry ny maha hetsika ara-kolontsaina miorina amin'ny finoana asan'ny mpanandro, dia fantatra ihany koa ho karazana mozika, izay ny tanjony dia mamorona aingam-panahy, fialan-tsasatra ary fanantenana. Ity karazana ity dia mifandraika amin'ny tontolo iainana sy ny finoana ny hetsika ara-kolontsaina, New Age.
Ity fomba sary ity dia mampiseho a fitambaran'ny hatsarana nomerika, miaraka amin'ny singa toa Fampisehoana romana sy sary sokitra kilasika, ankoatra izany singa teknolojia ary ny fampiasana singa japoney izay liana amin'ny kolotsaina Japoney.
Ny sary mifandraika amin'ny Vaporwave dia mifandray amin'ny estetika mifototra amin'ny "error in the digital age" Kanto glitch. Ranon-javakanto izay misafidy ho singa kanto «ny lesoka», noho izany dia nampiasain'izy ireo ny singa ankehitriny toy ny programa programa, lalao video, horonan-tsary ary feo. Ity hetsika ity dia misambotra ireo sanganasa ireo amin'ny fanohanana samihafa toy ny sary hosodoko, lamba na amin'ny alàlan'ny fanohananana vaovao maoderina kokoa toy ny horonan-tsary na amin'ny mozika sy feo.
Ny sary Vaporwave, ankoatr'izay dia aingam-panahy avy amin'ny famolavolana tranonkala tamin'ny taona 90, fampisehoana solosaina taloha ary ao a fomba estetika cyberpunk. Cyberpunk dia subgenre izay miresaka lohahevitra foronina somary futuristic science, ity subgenre ity dia fantatra amin'ny fitsaboana azy amin'ny sary miaraka amin'ny tontolo iainana retro-futuristic sy dystopian, miaraka amin'ny haitao avo lenta sy fari-piainana ambany ary mitondra ny anarany avy amin'ny fitambaran'ny cybernetics sy punk. Mampiavaka azy ny fiarahan'ny siansa mandroso, toy ny siansa informatika sy ny cybernetics, miaraka amina fanovana ifotony amin'ny lamina sosialy na kolontsaina.
Amin'ity fomba ity, araka ny efa nolazainay teo aloha, Ampiasaina ny litera japoney sy ny soratra tsy andrefana hafa, noho izany dia mampiseho a liana amin'ny tsy mitovy sy tsy fantatra. Mampiasa singa vahiny na mifanohitra amin'ny kolontsain'izy ireo ny artista mba hanehoana tandindona iray manokana na ho an'ny tombotsoam-bolo.
ny sary nataon'i Natasha Hassan izy ireo dia sasany amin'ireo ohatra sary tsara indrindra azontsika resahina amin'ity lahatsoratra ity momba io fomba mampiavaka azy io. Ao amin'ny fanoharana nataony maneho ny sasany amin'ireo singa mampiavaka azy izay notanisainay tamin'ny fiandohan'ny lahatsoratra. Mampiasa sary vongana romana klasika sy loko tena mahavariana sy mahavoky izy, ankoatry ny fanehoana ny "lesoka", ho aingam-panahy ho an'ny kanto kanto Glitch, manampin-tsary sy loko.
Mpanakanto sy mpanao sary Okrainiana, Vasya Kolotusha aingam-panahy avy amin'ny fomba Vaporwave amin'ny asany sasany. Mampiasà singa toy ny romana romana sy jiro LED ho singa maoderina kokoa.
Raha te hahalala fomba vaovao sy teknika ankehitriny ianao dia afaka mandeha eto.
Raha te hahafantatra karazana aingam-panahy amin'ny fanoharana hafa ianao dia afaka mandeha eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Vaporwave style graphic ho hetsika maoderina sy ankehitriny
George Ruiz dia hoy izy:
Izaho manokana mahita fa mahatsiravina :)
Valiny tamin'i Jorge Ruiz
Taovolo farany ambony dia hoy izy:
Tiako ity fomba kanto hafa ity izay mihamatanjaka sy mihamafy tato ho ato. Ireo dia fanandramana izay mamerina antsika ny kolontsaina tamin'ny taona 80 tany amin'ireo izay tia ny lamaody.
Valiny amin'ny taovolo farany ambony
Kitapo vektor maimaim-poana handravahana ny Noelinao amin'ny Krismasy